Göteborg oo dadka cayrta qaata waxbarasho u ogolaan doonto | Somaliska
Kamuunka Göteborg ayaa go’aan ku gaaray in dadka cayrta qaata loo ogolaado in ay waxbartaan. Go’aankaan oo ah midkii ugu horeeyay ee kamuun ka tirsan Sweden uu gaaro ayaa fursad u siinaya dadka shaqo la’aanta ah ee cayrta qaata in ay iskuulada ama jaamacadaha ay dhigtaan.
Kamuunka Göteborg ayaa waxaa sanad walba cayrta uga baxda lacag gaaraysa 1 bilyan oo karoon. Qorshaha ayaa waxaa soo jeediyay markii hore xisbiga Socialdemokraterna (S) iyadoo ay xitaa xulufada Alliensen soo dhaweeyeen balse ay doonayeen in dadka shuruud lagu xiro.
Qorshaha cusub ayaa ah in dadka cayrta ku jiray ugu yaraan 1 sano loo sameeyo qorshe waxbarasho kaasoo Arbetsförmedlingen ay qeyb ka yihiin. Qofka waa in uu 20 sano gaaray.
Go’aanka Göteborg ayaa ah mid soo dhaweyn mudan oo fursad weyn u ah dadka doonaya in ay waxbartaan balse horay loogu diiday iyaga oo cayrta ku jira.
waaw waa wax lagu farxo laakin ayaa kujirta wax barashada waa mid noocee ah mawaxay noqoneeysaa kurs camal oo inta lees raadiyo warqad leesku dhiibo kaliye mase waa mid ah wax barsha nooc yabadan sida caafimadka iyo dhaqaalaha siyaasada hadba qofka waxoow la yiraado waa oow kufiicanyahay ama qofko oow dalbado marka oow qameeyo qofka loqada iswedhishka ama oow kagaaro heer fiican oow qofku iskudabarikarooda .